Semalt Zvokugoverwa 5 Nhamba yeChirangaridzo yeChimwe kana Dhiyabhorosi Zvirongwa zvekuchera
. Chinangwa chegadziriro iyi ndechokuti uwane ruzivo rwakakosha kubva kumapeji akasiyana ewebhu uye uchinje kuve mafaira anonzwisisika sepaspets, CSV uye dhesi. Zvakachengeteka kutaura kuti pane zvakawanda zvinogona kuitika zvekutsvaga deta, uye masangano ehurumende, mabhizinesi, vashandi, vatsvakurudzi nemasangano asina ruzivo vanotsvaga dhidha zuva nezuva. Kubvisa dambudziko redu kubva kumabhulogi nemasiti kunotibatsira kutora zvisarudzo zvakanaka mumabhizimisi edu. Dhavhidha shanu dzinotevera kana kuti zvigadzirwa zvekugadzira zvinhu zviri kuitika mazuva ano.
Maji ose ewebhu akadzingwa neHTML, iyo inoonekwa seyoyo mutauro wekutanga wekutsvaga mawebsite. Mune deta iyi kana zvigadzirwa zvekutsvaga, zvinyorwa zvinotsanangurwa mu-formats ye HTML zvinowanikwa mune mabhokheni uye zvinogadziriswa mumusangano unooneka. Chinangwa chegadziriro iyi ndechokuverenga magwaro e HTML uye kuvashandura mumapeji ewebhu anooneka. Zviripo Grabber yakadaro data scraping tool iyo inobatsira kubvisa data kubva pamagwaro e HTML nyore nyore.
XPath mbatya chinhu chakakosha che web scraping . Icho chirevo chinowanzosanangurwa chekusarudza zvinhu mu XML ne HTML mafaira. Nguva dzose paunotarisa dhesi yaunoda kuitora, yako yakasarudzwa inoshandura ichaita kuti ive yakagadzirika uye yakatarisa fomu. Nzvimbo dzakawanda dzekutsvaga zvishandiso zvewebhu dzinobvisa ruzivo kubva pamapeji ewebhu chete kana iwe ukasimbisa data, asi XPath-based tools inotarisira kusarudzwa kwedhesi uye zvinyorwa panzvimbo yako kuitira kuti basa rako rive nyore.
4. Nguva Dzose
Nemazwi anogara aripo, zviri nyore kwatiri kunyora zvido zvechido mukati mezvinyorwa uye kubvisa zvinyorwa zvinobatsira kubva kune mawebsite makuru. Kushandisa Kimono, unogona kuita mabasa akasiyana-siyana paInternet uye unogona kutora mazwi anowanzoitika nenzira iri nani. Somuenzaniso, kana rimwe peji peji rine rine kero yese uye nhare dzekambani yekambani, unogona kuwana nyore nekuchengetedza iyi data uchishandisa Kimono se web web scraping programs. Iwe unogona zvakare kuedza kutaura kwemashoko okupatsanura magwaro eaderi mumaketani akasiyana-siyana kuti unyarare.
Mapeji ewebhu ari kunyorwa angagamuchira maitiro ekuita semantic, zvinyorwa kana metadata, uye ruzivo urwu runoshandiswa kuwana tsanangudzo dzakananga dze data. Kana iyo annotation yakabatanidzwa muwebhu peji, semantic annotation kutambura ndiyo chete nzira icharatidza mhinduro dzaidiwa uye kuchengeta deta yako yakabviswa pasina kukanganisa pahutano. Saka, unogona kushandisa web scraper iyo inogona kuwana demo data uye mirayiridzo inobatsira kubva kune mawebhusayithi akasiyana siyana Source .